Ubume benkcazo yoMbutho wezemidlalo weColonial Athletic
Kubafundi nabazali Ngaphandle kweKlasi
Association Colonial Athletic
Funda ngeeKholeji ezili-10 kwi-Colonial Athletic Association
I-Colonial Athletic Association yiCandelo le-NCAA I inkomfa yezemidlalo kunye namalungu avela kumazwe ecaleni kweNxweme yaseAtlantic esuka eMassachusetts ukuya eGeorgia. Ikomkhulu lekomfa lifumaneka kwiRichmond, eVirginia. Uninzi lwamalungu ziiyunivesithi zikawonkewonke, kodwa inkomfa ibandakanya uluhlu lweentlobo zezikolo. Ikholeji kaWilliam noMariya yiyona nkampani ehloniphekileyo kwaye ikhethayo, kodwa zonke izikolo ezilishumi zineenkqubo ezinamandla zemfundo.
College of Charleston. ithala leencwadi / iFlickr
Eyasungulwa ngo-1770 iKholeji yaseCharleston inika indawo ebutyebi kubafundi. I-ratio ine-13 ukuya kwe-1 yomyinge womfundi / ubuchule kunye nesayizi yobukhulu beklasi malunga no-21. Ngenxa yale nto, iKholeji yaseCharleston ibonisa ixabiso elikhulu lemfundo, ngakumbi abahlali baseMzantsi Carolina. Ikharityhulam yenzelwe ubugcisa be-liberal kunye nezesayensi, kodwa abafundi baya kufumana iinkqubo eziphambili zezobugcisa kwishishini kunye nemfundo.
Indawo: Charleston, South Carolina
Uhlobo lweSikolo: Iikholeji zobugcisa be-liberal
Ubhaliso: 11,649 (10,461 izifundo zakudala)
Ukwamkela izinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iProfayili yaseColoreston .
KwiYunivesithi yaseDelaware. mathplourde / Flickr
IYunivesithi yaseDelaware eNewark iyunivesithi enkulu kunazo zonke kwilizwe laseDelaware. Iyunivesiti yenziwe iikholeji ezi-7 ezahlukileyo apho iKholeji yoBugcisa nezoSayensi yona mkhulu. Ikholeji yezobuNjineli be-UD kunye neKholeji yezoRhwebo kunye nezoQoqosho zihlala zihamba kakuhle kwizinga likazwelonke. Amandla eYunivesithi yaseDelaware kwizobugcisa kunye nobugcisa bezobugcisa athola isahluko seqela elihloniphekileyo le- Phi Beta Kappa .
Indawo: iNewark, iDelaware
Uhlobo lweSikolo: uphando loluntu kwiprayunivesithi
Ubhaliso: 21,489 (i-17,872 iidanga lokugqibela)
Iqela: Fightin 'Blue Hens
Ukulinganisa izinga, amanani okuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iprofayili yaseYunivesithi yaseDelaware
IDrexel University. kjarrett / Flickr
Efumaneka eWest Philadelphia ngasemva kwindlu yaseYunivesithi yasePennsylvania , iDrexel University inokuqwalaselwa kakuhle kwiinkqubo zayo zangaphambi kobugcisa kwiinkalo ezinjengezoshishino, ubunjineli kunye noongikazi. Imilinganiselo ye-Drexel yokufunda ngokufunda, kwaye abafundi banokuxhamla uluhlu olubanzi lweenkqubo zokufunda ngezizwe ngamazwe, kwi-internship, kunye nemfundo yokusebenzisana. Iyunivesiti inceda ukubeka abafundi kwinethiwekhi yayo eyi-1,200 iinkampani kwiindawo ezingama-28 kunye neendawo ezingama-25 zamazwe ngamazwe.
Indawo: Philadelphia, Pennsylvania
Uhlobo lweSikolo: Iyunivesithi yangasese
Ubhaliso: 24,860 (15,047 abafundele iidanga)
Ukwamkela izinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iphrofayili yeDrexel yaseYunivesithi
University of Elon
Carlton eYunivesithi yase-Elon. I-Credit Credit: Allen Grove
I-University ye-Elon ye-brick ebomvu ebomvu iphakathi kweGreensboro neRaleigh eNyakatho Carolina. Kwiminyaka yakutshanje iyunivesiti iye yahlaselwa njengoko ifumene ukuqaphela kwimigudu yabo yokubandakanya abafundi. Ngo-2006, i-Newsweek-Kaplan egama lingu-Elon i-school best in the country for engagation. Uninzi lwabafundi baka-Elon bathatha inxaxheba ekufundweni kwamanye amazwe, kwi-internship, kunye nomsebenzi wokuzithandela. Kule ndlela i-majors eyaziwayo kakhulu i-Business Administration kunye noPhando lwezoNxibelelwano
Indawo: Elon, North Carolina
Uhlobo lwesikolo: eyunivesithi yangasese
Hlola i-Campus: I- Elon University Photo Tour
Ukwenyuka kwezinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iProfayili ye - Adon University .
Hofstra University. slgckgc / Flickr
I-campus yase-Hofstra yama-240-ekre e-Long Island yenza ukuba kufumaneke lula kuwo wonke amathuba eNyuvesi yaseNew York. Iyunivesithi inomlinganiselo we-14 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule bobukhulu kunye nobukhulu bendawo yobukhulu be-22. Ubomi bekampus busebenzayo, kwaye iHofstra inokuziqhayisa ngamacandelo amaqela angama-170 kunye nemibutho equka i-Greek system esebenzayo. Ushishino luyaziwa kakhulu phakathi kwegraduate, kodwa amandla e-Hofstra University kwimfundo yobuninzi kunye nesayensi yafumana isikolo isahluko sePhi Beta Kappa .
Indawo: Hempstead, eNew York
Ubhaliso: 11,404 (7,183 izifundo zakudala)
Ukwamukela izinga, amanqaku okuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iphrofayli yaseHofstra University
KwiYunivesithi yaseJames Madison
KwiYunivesithi yaseJames Madison. i-taberandrew / Flickr
I-JMU, iYunivesithi yaseJames Madison, inika iiprogram ze-grade-grade degree kunye neendawo zoshishino eziziwayo. I-JMU inokugcinwa okuphezulu kunye nezinga lokugqiba iziqu ngokuthelekiswa neyunivesithi zikarhulumente ezifanayo, kwaye isikolo sisoloko sihamba kakuhle kwizinga lezizwe zaso zimbini kunye nekhwalithi yezemfundo. I-campus ekhangayo ifaka i-quad evulekile, i-echibi, kunye no-Edith J. Carrier Arboretum.
Indawo: Harrisonburg, Virginia
Uhlobo lwesikolo: eyunivesithi yoluntu
Ubhaliso: 19,722 (i-17,900 zee-graduate)
Ukwamkela izinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iprofayile yeYunivesithi yaseJames Madison
I-Northeastern University Crew Team. Uphawu lwePAD / Flickr
Amabanga ase-Northeastern-university angaphumelela angakhetha kwiiprogram ezinkulu ezingama-65 kwiikholeji ezintandathu zeyunivesithi. Amashishini, ubunjineli kunye nempilo yezona zintle zithandwa kakhulu. Ikharityhulam ye-Northeastern ishicizelela ukufunda, kwaye isikolo sinomsebenzi oqinileyo kunye nenkqubo yoqhagamshelwano oluye lafumana ingqwalasela kazwelonke. Abafundi abaphumeleleyo kufuneka bahlole iNkqubo ye-Honors ye-Northeastern.
Indawo: Boston, eMassachusetts
Ubhaliso: 26,959 (aba-16,576 abagqwesileyo)
Hlola iKampus: I- Northeastern Photo Tour
Ukwamkela izinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iphrofayili yaseNort - Eastern
I-Towson University. Urban Hippie Uthando / Flickr
I-enyuvesi yase-Towson ye-328-acre campus isekhilomitha ezili-8 kumntla weBaltimore. I-Towson iyunivesithi yesibini enkulu kunazo zonke e-Maryland, yaye isikolo ngokuqhelekileyo sikwenza kakuhle kwii-yunivesiti ze-yoluntu zengingqi. Iyunivesithi inikeza iinkqubo ezingaphezu kwe-100, kwaye phakathi kweendawo zokuqeqeshelwa iiporogram ezifana nezoshishino, imfundo, uongikazi kunye noonxibelelwano zidume kakhulu. I-Towson inomyinge we-17 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule be-faculty. Isikolo sizuze amanqaku aphezulu ngokukhuseleko, ukuxabisa, kunye nemizamo eluhlaza.
Indawo: Towson, Maryland
Ubhaliso: 21,464 (i-17,517 izifundo zakudala)
Hlola i-Campus: iTowson University Photo Tour
Ukwamkela izinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iprojekthi yaseYunivesithi yaseTowson
IYunivesithi yaseNorth Carolina iWilmington
UNC Wilmington. UAron / Flickr
I-UNC iWilmington isekhilomitha ezintlanu ukusuka eWrightsville Beach kunye ne-Atlantic Ocean. Izifundo ze-UNC zezifundo zakudala zingakhetha kwiiprogram ze-bachelor degree degree. Iinkalo zobugcisa ezifana nezoshishino, unxibelelwano, imfundo kunye noongikazi ziyaziwayo kakhulu. Iyunivesiti iphakanyiswa kakhulu kwiiyunivesithi zenkosi yasezantsi. I-UNCW iwina amanqaku aphezulu kwixabiso, kwaye kwiiyunivesithi zikarhulumente zaseNyakatho Carolina yinto yesibini kuphela kwi- UNC Chapel Hill yezinga layo lokugqwesa iminyaka emine.
Indawo: Wilmington, North Carolina
Ubhaliso: 13,145 (11,950 izifundo zakudala)
Iqela: i- Seahawks
Ukwamukela izinga, amanqaku okuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga iYunivesithi yaseNorth Carolina iphrofayili yeWilmington
UWilliam noMariya. Lyndi & Jason / flickr
UWilliam noMariya bahlala phakathi kwiiyunivesithi zikarhulumente ezilungileyo kakhulu kweli lizwe, kwaye ubukhulu bayo buncinci bubuhlukanisa namanye amanyunivesithi aphakamileyo. Ikholejini ineenkqubo ezihlonelwe kakuhle kwishishini, umthetho, ingxelo, ubudlelwane bamazwe ngamazwe kunye nembali. Eyasungulwa ngo-1693, iKholeji likaWilliam kunye noMariya yiziko leminyaka elidala lezemfundo ephakamileyo kweli lizwe. I-campus itholakala kwimbali yaseWilliamsburg, eVirginia, kwaye isikolo sasifundisa abaongameli abathathu base-US: uTomas Jefferson, uJohn Tyler noJacob Monroe. Ikholejini ayinayo isahluko se- Phi Beta Kappa , kodwa iqela elihloniphekileyo lavela khona.
Indawo: Williamsburg, Virginia
Uhlobo lwesikolo: iYunivesithi yasePubilc
Ubhaliso: 8,200 (6.071 izifundo zakudala)
Ukwamkelwa kwezinga, iimvavanyo zokuvavanya, iindleko kunye nolunye ulwazi, jonga ikholeji yakwa-William & Mary profile
Yintoni enokuyenza ngeveki ende
Ukuvota njengomfundi weKholeji
INkomfa ye-East Coast (ECC)
Ukunyumba kwamaKhaya abafundi
I-Great Lakes I-Intercollegiate Conference (i-GLIAC)
INgqungquthela yeLone Star
Yiyiphi i-Dominic Dominance kwaye iSebenza njani
Impembelelo kwi-American Home Styles, 1600 ukuya namhlanje
Ixesha lokusebenzisa i-Elision ngesiTaliyane
Superfeet Insoles Ukuhlaziywa komkhiqizo
Indlela yokucima i-Squealing Belt kwi-Car yakho
Ibali elilandela umculi uRay Charles
I-Ted Sorensen kwi-Kennedy Style of Speech-Writing
Indlela Yokuba Umculi Ovelele
Iimpawu ezininzi zeLizwi elithi 'iMdlalo'
Incwadi yam X
Izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiiyunivesithi eziphezulu
UYesu uyondla i-5000 - Ingxelo yeBhayibhile
Kutheni Intsha Ingabhalisa kwiZikolo eziPhakamileyo ze-Intanethi?
I-Simplified Version yoLwimi lwaseJamani
Iingcebiso zokufunda ukuhlolwa kweMidterm